अरुलाई एउटै भेटमा प्रभाव छाड्ने चमत्कारिक ब्यक्तित्व कसरी तयार हुन्छ? बिबिसीको रिपोर्ट :: BIZMANDU
अरुलाई एउटै भेटमा प्रभाव छाड्ने चमत्कारिक ब्यक्तित्व कसरी तयार हुन्छ? बिबिसीको रिपोर्ट
प्रकाशित मिति: Nov 6, 2017 11:28 AM
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, एप्पलका पूर्वसिइओ स्टिब जब्स, वेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, वाराक ओवामा, उनीहरुमा एउटा खास विशेषता के होला?
तपाई उनीहरुलाई मन पराउनुहोस् या घृणा गर्नुस्। तर एउटा कुरा स्वीकारन् करै लाग्छ- उनीहरु चमत्कारिक ब्यक्ति हुन्।
स्टिब जब्स पनि अर्को उदाहरण हुन्। उनको सबै भाषण सुनेकी र हेरेकी ओलिबिया फाक्स भन्छिन्- धेरै कर्मचारी जब्सलाई मनपराउँदैन थिए। तर पनि उनीहरु जब्सको पर्सनालिटीबाट मोहित हुन्थे।
अमेरिकामा बस्ने ओलिबियाले 'चमत्कारिक मिथ' नामको किताव नै लेखेकी छिन्।
किताव लेख्दा ओलिबियाले चमत्कारिक ब्यक्तिलाई पनि वर्गीकरण गरेकी छन्। उनी भन्छिन्- केही मान्छेसँग स्टार पावर हुन्छ। जस्तो चलचित्रका अभिनेताहरु। उनीहरु क्यामेराको अगाडि राम्रो परफरमेन्स दिएका कारण सर्वसाधारणलाई फ्यान बनाउँछन्।
अर्को समूह छ, जो आफू अगाडिका मान्छेको कुरा निकै ध्यान दिएर सुन्छन्। यस्ता मान्छेका पनि फ्यान धेरै हुन्छन्। अर्को वर्ग हो- साँच्चैकै चमत्कारिक व्यक्तित्वका धनीहरु। दलाइ लामा यही वर्गमा पर्छन्।
स्विजरल्यान्डको लुसान युनिभर्सिटीका जोन एन्टोनाकिसले यस बारेमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन्। उनी भन्छन्- केही मान्छेले एउटा प्रेरणादायी भाषण सुनेपछि सामान्यभन्दा १७ प्रतिशत बढि राम्रो काम गरेका छन्।
सन् २०१६ भएको एउटा अनुसन्धान भन्छ- जुन मान्छेको चमत्कारिक ब्यक्तित्व हुन्छ, सर्वसाधारण त्यसलाई बढि नै विश्वास गर्छन्।
के त्यसो भए जो कोही चमत्कारिक ब्यक्तित्वको धनी हुन सक्छ त?
यसका लागि एउटा प्रयोग गरौं। तपाईलाई सबैभन्दा चमत्कारिक ब्यक्तित्व को लाग्छ त्यसलाई एक पटक फेरि हेर्नुस्। उसका भाषण सुन्नुस्। भाषणलाई महशुस गर्नुस् त, केही पनि नयाँ कुरा त छैन। तै पनि उ चमत्कारिक लाग्छ। किन?
वास्तवमा यस्ता मान्छेहरु शब्दको सही प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा राख्ने खुवी भएका हुन्छन्। यसका लागि जरुरी छ- सही उदाहरण, सही पङ्तिको सही ठाउँमा प्रयोग। सही समयमा कथा भन्नु। जोक गर्नु वा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने खुवी यस्ता व्यक्तित्व भएकाहरुसँग हुन्छ। दुई फरक कुरालाई एउटा विन्दुमा उभ्याएर तुलना गर्ने क्षमता पनि यस्ता ब्यक्तिहरुसँग हुन्छ। यसले भाषण सुन्नेहरुले नयाँ कुरा केही नभेटे पनि नयाँ कुरा सुनिरहेको जस्तो महशुस गर्छन्।
चमत्कारिक हुनका लागि अगाडिको मान्छेको धारण बुझ्न अति नै आवश्यक हुन्छ। अर्थात भनौंन मन पढ्न सक्नु पर्छ। त्यसपछि उसको भित्र आशा जगाउनु पर्छ। आफ्नो लागि विश्वाश जगाउनु पर्छ। उच्च नैतिक कुरा गरेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। यही त गरेका हुन्छन् नि- चमत्कारिक ब्यक्तित्व भएका हुन्। र यही गरेका कारण उनीहरु चमत्कारिक देखिएका हुन्छन्।
यस्तै उदाहरण थिइन्- वेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्यचर। उनी प्राय ओजिलो भाषण गर्थिन। उनले सन् १९८० मा आफ्नो पार्टी बैठकमा दिएको भाषण आज पनि उदाहरणका रुपमा याद गरिन्छ। त्यो भाषणमा उनले विरोधिहरुलाई एकदमै आक्रमण गरेकी छिन्, तर उदाहरण, विभिन्न प्रशंङ्ग, तथ्यांकहरुको प्रयोग गरेर।
हेरौं न, हिलारी क्लिन्टनको तुलनामा विल क्लिन्टन आज पनि लोकप्रिय छन्। हिलारीको भाषण सुन्दा लाग्छ- उनले लेखेको कुरा पढिरहेकी छिन्। तर बिल क्लिन्टनको भाषण भित्रैबाट भरिएर आएको सुनिन्छ। बाराक ओबामाको भाषण पनि त्यही हो।
तपाईले साधारण कुरा पनि ओजिलो तरिकाले, विश्वास जगाउने तरिकाले सुनाउन सक्नु भयो मान्छेहरु तपाईको फ्यान बन्न थालिहाल्छन्। चमत्कारिक ब्यक्तित्व भएका मोदी, ओवामा, बिल क्लिन्टन, स्टिव जम्ब आदिले आखिर यही त गरेका हुन् नि।
अरुलाई एउटै भेटमा प्रभाव छाड्ने चमत्कारिक ब्यक्तित्व कसरी तयार हुन्छ? बिबिसीको रिपोर्ट को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।